Peptide Cosmetic Tayada Sare leh Tetrapeptide-4 Anti-gabowga iyo Soo-saaraha laalaab-diidka iyo Alaab-qeybiye | Zhuoer
Magaca badeecada Tetrapeptide-4
Isku xigxiga H-Gly-Glu-Pro-Gly-OH
Qaaciddada Molecular C14H22N4O7
Miisaanka Caanaha 358.35
Kaydinta iyo Nolosha shelf Tetrapeptide -4 waa mid deggan 24 bilood laga bilaabo taariikhda la soo saaray at -20 ℃ ilaa -15 ℃ ee qaboojiyaha. Waxaa laga ilaaliyaa iftiinka, xir xirmada hawo ka ilaali marka aan la isticmaalin.
Tetrapeptide-4 wuxuu u dhaqmaa sidii wakiil ka hortagga gabowga, kor u qaadista iyo ka hortagga duuduubka. Waa tetrapeptide oo kordhisa soosaarka kolajka ee maqaarka iyo soosaarka fiber -ka ee matrix -ka ka baxsan. Tani waxay keentaa in si qotodheer laalaabku u yaraado iyo wajiyada wejiga oo aad loo qeexay sida saamaynta muuqaalka. Tetrapeptide-4 ayaa ku habboon in loo isticmaalo ka-hortagga gabowga iyo qaababka kale ee daryeelka maqaarka.
Sideen u qaataa Tetrapeptide-4?
Hore: Cosmetic peptide Tripeptide-29 waxay kordhisaa kolajka iyo dayactirka maqaarka CAS 2239-67-0
Xiga: Cosmetic peptide Tetrapeptide-30 oo loogu talagalay dhalaalka maqaarka iyo iftiinka
Peptide qurxinta Acetyl tetrapeptide-11 ee Ant ...
Peptide Cosmetic Hexapeptide-10 anti-gabowga iyo ...
Palmitoyl Dipeptide-5 Diaminobutyroyl Hydroxyth ...
Cosmetic peptide Copper Tripeptide-1 Ghk-Cu budada ...
Peptide qurxinta Trifluoroacetyl tripeptide-2 a ...